Imiphumela yesikhathi esizayo yamarobhothi nobuchwepheshe obusha emisebenzini | Ezezimali Zomnotho
Vumelanisa nezinguquko ezinqala, ezingacacile nezishintsha kakhulu ubuchwepheshe obusha namarobhothi ongazijwayeza kunoma iyiphi indawo, ngeke kube lula noma kube lula ukuxazulula.
Izinguquko nemiphumela ekhiqizwa kulolu hlobo lwesimo ingaqhuma ngaphandle kwesihawu endaweni ethile futhi ukudideka kungashesha.
Ithonya lomcimbi onjalo linamandla okusatshalaliswa ezindaweni eziningi zokuphila komuntu. Umhlaba womsebenzi (izinkampani nabasebenzi) yisibonelo salokhu, ngasikhathi sinye imiphumela yayo izothinta umnotho womuntu siqu nowomndeni, nawo owamazwe nezifunda.
Akungabazeki ukuthi sekuvele kufayela le- ibhizinisi lanamuhla, namandla okuba kuthinta ingxenye enkulu yomphakathi kusasa.
Ukufakwa kwedijithali kokuqashwa, ubuchwepheshe obuphazamisayo, irobhothi: Lawa amanye amagama maqondana nale nkinga lapho ukucabanga kubaluleke khona.
Umuntu, umkhiqizo wobuciko bakhe obungaphakathi, ukwazile kuwo wonke umlando ukuthatha izinqa ezinkulu kokutholakele nakubuchwepheshe, kepha phakathi kwezingqinamba nemingcele kufanele achaze futhi anakekele izinga lakhe lokusebenza ngokuningiliziwe, ngoba kuthambekele ekubeni amandla amaningi kanye namandla angaqongelelwa ekutholeni nasekuqhubekeni kwawo, okungaba yi-boomerang egcina ilimaze umbhali wayo.
Ngokukhuluma nje ngamandla enuzi nawo wonke umphumela omuhle futhi owonakalisayo oye waba nawo emhlabeni, nokuba ngumuntu owasungula amandla okuwusebenzisa; kwanele ukukwazisa lokho isu lokukhombisa kuzofanele ihambisane nenqubekela phambili, ukuze ingalahlekelwa noma ekugcineni ithinteke kakhulu.
Siya kule ndatshana ngesihloko esichaza ubuchwepheshe obusha, amarobhothi, ubuhlakani bokufakelwa y imiphumela emsebenzini lokho sekuvele kuyasatshalaliswa, kepha izehlakalo zazo ezizoqiniswa ngokuqhubekayo unyaka ngamunye odlulayo.
Ake sihlaziye le ndaba kusuka emaphethelweni athile athakazelisayo, avela ngeziphetho mhlawumbe eziphikisanayo, futhi singakwazi ukubona ngeso lengqondo futhi ucabange ngokuthi kusithinta kanjani, ngaliphi izinga, izinzuzo - ukungalungi futhi uma sikwazi ukulinganisa imiphumela yaso emihle nemibi, okungenani sicabange ngendlela lolu daba olusondela ngayo namuhla.
1 Ubuchwepheshe obuphazamisayo nokwakhiwa kwamathuba emisebenzi
2 Ingabe ubuchwepheshe bungasenza sibe nobandlululo?
3 Umkhakha wezobuchwepheshe ungadala imisebenzi
3.1 Isikhathi sokuphendula nokuzivumelanisa nezimo ukuze sishintshe Ingabe kuzosinika isikhathi?
Ubuchwepheshe obuphazamisayo nokwakhiwa kwamathuba emisebenzi
I-Las ubuchwepheshe obuphazamisayo, obizwa nangokuthi emisha ephazamisayo, yibo lobo buchwepheshe kanye nezinto ezintsha ezibanga ukuguqulwa okukhulu noma okuncane, ngokuthambekela kokunyamalala noma kokwenza izindlela, amadivayisi nemikhiqizo iphelelwe yisikhathi.
Ngale ndlela, kungenzeka ukuncintisana ngempumelelo nobuchwepheshe obubabazekayo ngesikhathi esithile, ukusungula nokuhlanganisa emakethe.
Kuzinto ezintsha eziphazamisayo, uma zihlaziywa esikhathini esifushane, kungaphikiswa ukuthi kunamathuba amaningi okuthi kwenzeke ukwanda kokuntuleka kwemisebenzi emikhakheni ethile. Noma kubalulekile ukusho, ukuthi uma kubhekwa isikhathi eside, lapho kukhona ukwanda komkhiqizo, imisebenzi ingakhiwa.
Amarobhothi nobuhlakani bokufakelwa kuzoba nomthelela emphakathini nasekuqashweni
Ubuhlakani bokufakelwa namarobhothi kuzoba okulandelayo gxuma lokho isintu esizokunika, ifana kuphela nezinguquko zezimboni ezashintsha umhlaba ngaleso sikhathi.
Lapho sibhekene nesihloko samarobhothi nobuhlakani bokufakelwa, saqala ukusondela kufayela le- izingozi namandla angahle abe khona, lokho kungahambisana nokwakhiwa kwabantu.
Mhlawumbe sisondela esikhathini esizayo lapho emphakathini, ukuba nomsebenzi kukodwa kungazwakali ukucubungula ukuthi umuntu unalo yini ilungelo lokudla. Kuthiwa kungenzeka kakhulu ukuthi, ukungabi bikho komsebenzi kuyahambisana emhlabeni ngenxa yalezi zizathu ezibalulwe.
Forrester, inkampani yocwaningo lwemakethe, isho lokho mhlawumbe cishe imisebenzi eyizigidi ezingama-25 ingahle inyamalale eminyakeni eyishumi, umkhiqizo entuthukweni yezobuchwepheshe.
Lapho kufika amarobhothi nobuhlakani bokufakelwa, futhi zifika ngokungathi sína, ngawo wonke amandla nemiphumela ezoba nayo emnothweni, emphakathini nasekuqashweni; lapho-ke ngeke kusasala lutho ngaphandle kokucabanga kabusha izindaba zalolu hlobo, uma kungenziwanga kusenesikhathi.
Abaningi babheka ikusasa ngokuqinisekile, futhi bathi ngeke kusasele lutho ngaphandle kokuzivumelanisa nokuzifaka kabusha kubuchwepheshe.
Kuwukuhlakanipha ukusondela kulezi zimo ngolwazi olwanele. Kunoma ikuphi, unyaka nonyaka azoba nsuku zonke ezimpilweni zethu lolu hlobo lobuchwepheshe, kanye nenqubo yokufanisa izokhula.
Lapho izinguquko ziza, izingqinamba eziningi zihlobene ne- intela, umnotho kanye nokuqashwa. Umthelela wobuhlakani bokufakelwa emphakathini uzoba namandla kakhulu.
Abanye ochwepheshe baqinisekisa ukuthi amarobhothi ngeke bazibambele imisebenzi. Okusho ukuthi, ngeke bacatshangelwe noma baklanyelwe le njongo, kepha kunalokho bazocabangela imisebenzi engena esikhundleni.
Ukugxila kuzokwazi ukufaka esikhundleni saleyo misebenzi ephindaphindwayo noma imisebenzi noma leyo edinga ukucaciswa okukhulu, inkinga ubuchwepheshe obuzokwazi ukukunikeza.
Akudingeki ukuthi kube kubi, kepha qaphela!
Uma i ukwenziwa kwedijithali ukuzibandakanya emsebenzini, ukusebenza kahle kanye namazinga okukhiqiza angakhuphuka kakhulu, futhi futhi imisebenzi inganda.
Kuthiwa uma iSpain itshala imali eyanele kulokhu kuze kufike u-2020, imisebenzi emisha engama-250 ingavela unyaka nonyaka. Lokhu kushiwo yi CEOE (I-Spanish Confederation of Organisations Izinhlangano).
Abanye ochwepheshe banombono, wokuthi izilinganiso zalolu hlobo zinethemba elikhulu kakhulu. Bayavuma ukuthi kulungile ukuthi izinto ezintsha zobuchwepheshe ziyakwazi ukudala ingcebo nomsebenzi, kepha hhayi ngesikhathi esifushane kangaka.
Ngaphandle kwalokhu, kunombono wokuthi akulona iqiniso ubukhona bezwe lobuchwepheshe nelidijithali kuzokhiqiza imisebenzi eminingi, Uma kungenjalo okuphambene.
Izinkampani ezenza utshalomali olukhulu ekwakhiweni kwedijithali nakubuchwepheshe bamuva zizoba nokukhiqiza okuphezulu, kodwa ngasikhathi sinye bazodinga abasebenzi abambalwa.
Abanye ochwepheshe basikisela ukuthi ukufakwa kwamakhompiyutha kanye nokuthuthuka kwezobuchwepheshe ngendlela egcizelelekile akusikho lokho okufanele kuholele umphakathi esimweni sokuntuleka kwemisebenzi esikhula njalo.
Uma umkhiqizo ukhula, kuzoba nomthamo omkhulu womhlaba wonke womnotho, okhiqiza ngale ndlela izimfuno ezintsha neminye imisebenzi emisebenzini engafani.
Kukhona enye inkinga futhi ihlobene nokuthi imisebenzi enobudlelwano obubalulekile nobuchwepheshe bedijithali izodinga i- ikhono lokwakha elenele plus ukuqeqeshwa okwanele.
Labo abangazange babandakanyeke kulolu hlobo lobuchwepheshe bazodinga isikhathi esithile ukuze bakwazi ukubusebenzisa. Le ntuthuko kuzodingeka ihambisane nomsebenzi wezenhlalakahle kanye nokutshalwa kwemali okuqinile ezakhamuzini.
¿Ingabe ubuchwepheshe bungasenza sibe nobandlululo?
IJapan izwe eliyinkimbinkimbi nomphakathi ngomqondo wobuchwepheshe. Iphathelene kangcono namarobhothi ezimbonini zayo kunabokufika abancintisana ngemisebenzi. Ngabe lolu wubandlululo? … Kusala ukuthi kubonakale.
Ukuhlaziywa kuyanzima lapho inani eliphakeme elethwa ubuchwepheshe kanye nayo yonke into emisha ehlobene nale mvelo kumikhiqizo lihlaziywa kahle, livumela ikhwalithi nokwahlukanisa ubuhle.
Umkhakha wezobuchwepheshe ungadala imisebenzi
Abachwepheshe abambalwa bathi izinkinga zokuqashwa nemvelo yazo, zidala izinguquko ezihlala zenziwa ezimweni ezahlukahlukene. Ngakolunye uhlangothi imisebenzi iyawa ngenxa yenkinga emazweni ahlukene, kodwa ngasikhathi sinye kukhona dala amathuba emisebenzi lokho kwakungekho ngaphambili.
Umkhakha wezobuchwepheshe kanye no-R + D + i (ucwaningo, intuthuko kanye nezinto ezintsha) unamandla amakhulu okudala imisebenzi. Ukuze izwe lithuthuke futhi likwenze lokho ngendlela engajahi, kudingeka likhiqize ulwazi lwesayensi nobuchwepheshe, njengoba nje izinkampani zalo zivezwa ngokuqinile ku-R + D + i. Ukuguqulwa kwedijithali kuzoba nokuningi okuhlobene nakho.
Yonke imizamo amazwe ayenzayo ukukhuthaza ubuchwepheshe kanye nokutshalwa kwezimali emisha nasekuthuthukiseni, izovuna ukwakhiwa kwamathuba emisebenzi. Izibonelo yilezo ezihlobene ne-biotechnology, ICT (ubuchwepheshe bolwazi nezokuxhumana) kanye ne-e-commerce.
ESpain, Sekuvele kushiwo ngochwepheshe ukuthi umkhakha wezobuchwepheshe kuzoba ngomunye walabo abazokhiqiza imisebenzi eminingi esikhathini esifushane.
Isikhathi sokuphendula nokuzivumelanisa nezimo ukuze sishintshe Ingabe kuzosinika isikhathi?
Amazwe omhlaba abhekane nokuqedwa kwemisebenzi ngezikhathi ezithile emlandweni wawo. Umnotho wezwe wenze ushintsho olukhulu njengoba bekulokhu kuhamba kusuka emnothweni wasemakhaya kuye kweyezimboni.
E-USA ngokwesibonelo, lo mcimbi wabonwa esikhathini (1870-1970) esineminyaka eyi-100. Ngalo mzuzu banyamalala ngase- Amaphesenti angama-90 emisebenzi eziqhamuka ezindaweni zasemakhaya.
Kuleli lizwe elifanayo nasesikhathini esiphakathi kuka-1950 - 2010, ngenxa yokuthuthuka kwezobuchwepheshe, cishe Imisebenzi engama-75% emafemini.
Omunye wemiphumela ebonwe uhlobene ngqo nale nto kwaba ukuvela "komnotho wezinsizakalo". Noma kunjalo, imisebenzi emikhulu kakhulu ivela emkhakheni wezinsizakalo hhayi emkhakheni okhiqizayo.
Isimo sethu namuhla siba yinkimbinkimbi ngokwengeziwe, ngoba inkathi ende enjalo yokuzivumelanisa nezimo ayinakwenzeka njengaleyo ebalwe ezibonelweni ezishiwo, iminyaka engama-60 noma eyi-100.
Kuzodingeka ukuthi ukwazi uku vumelanisa ku-10 noma ku-15, ngaphandle kwalokho singazithola sisenkingeni enkulu, okungenzeka sibhekane nayo inkinga enkulu yokungasebenzi zesikhathi sonke.
Sibonile ukuthi akuyona yonke imibono efana, nokuthi inkinga ayilula, nokuthi iplanethi nomphakathi kusendleleni ebheke kulo mkhuba, osekuvele kubhekwe ukuthi nakanjani.
Amandla ezenhlalo nezepolitiki, kanye nomkhakha webhizinisi, kufanele zihlanganiswe ukuze lokhu kweqa kuhambisane nemiphumela yokuqashwa ancishisiwe, ukuphatha ukuzivumelanisa noshintsho oluzayo, ngendlela enhle futhi ehlakaniphe kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Umsebenzi » Imiphumela yesikhathi esizayo yamarobhothi nobuchwepheshe obusha emisebenzini